Bakhaara Real Madrid ee Dubai oo lagu iibinayo maaliyadaha Eden Hazard & lambarka uu xiran doono oo la xaqiiqsaday. – Gool FM - Idman News
Bakhaara Real Madrid ee Dubai oo lagu iibinayo maaliyadaha Eden Hazard & lambarka uu xiran doono oo la xaqiiqsaday. – Gool FM
(Dubai) 13 June 2019. Waxaa la rajeynayaa in Eden Hazard uu xiran doono lambarka 7-aad ee kooxda Real Madrid, kooxda ayaana durba ku iibineysa bakhaarkeeda Dubai maaliyadda xiddigaan magaciisa lagu xardhay sidoo kalana uu ka muuqdo lambarka 7-aad.
Mariano Diaz ayaa ah xiddiga heysta lambarkaan, balse wuxuu heystaa fursad fiican uu kooxda mar kale kaga tagi karo, balse si rasmi ah Hazard looma siinin lambarka, walow la sheegay in maanta lagu soo bandhigayo garoonka Santiago Bernabeu.
Waxaa lasoo warinayaa in bakhaarka Dubai lagu iibinayay maaliyadda xiddigaan ee lambarka 7-aad tan iyo jimcadii markaas oo lagu dhawaaqay heshiiska xiddigaan, sidoo kalana saxaafadda Spain ayaa soo tabisay in garoonka diyaaradaha magaalada Barcelona lagu iibinayo maaliyadda lambarka 7-aad ee Hazard.
Maanta ayey wax walba kala cadaan doonaan marka Eden Hazard uu soo gaaro garoonka uu waligiis ku riyoon jiray ee Santiago, wuxuuna ka mid noqday 10-ka saxiix ee ugu qaalisan dunida kubadda cagta maadaama la sheegay inuu in ka badan 100 Malyan oo Yuuro ugu biiray Los Blancos.
Kooxda Tottenham oo u soo bandhigtay Real Madrid qorsho cusub ay ku heli karto Christian Eriksen – Gool FM
Wax badan ayaan radinaaye ciwaan kaan Ugu danbeentiina Gacanta yaan ku dhigay…
Previous Previous post: Inuu ku daydo Ronaldo, hadii uu tartan diyaar u yahay, goolasha uu dhalin doono & Wax walba uu ka hadlay saxiixa cusub ee Los Blancos Luka Jovic.
Next Next post: Mogadishu Journal » Guddigii ay dowladda magacaawday oo maanta tagaya Baladweyne